Akụkọ - Gini mere igwe anaghị agba nchara m ji agbaji?
Igwe igwe anaghị agba nchara n'èzí nwere ọtụtụ ọnọdụ siri ike. Ndị a na-agụnye ihu igwe, okpomọkụ, ihe na-ehicha kemịkalụ na ncha, na ndị ọzọ, nke na-eme ka ha nwee ike ịdaba na corrosion na ntụpọ. Ọbụna ma ọ bụrụ na aha nke ihe igwe anaghị agba nchara na-egosi na ọ dịghị ntụpọ nchara, ọ bụghị ọtụtụ ihe na-adịghị emetụta mbibi. Nlekọta na nlekọta mgbe niile dị mkpa iji mee ka ndụ ọrụ ha dịkwuo elu. Igwe anaghị agba nchara bụ ihe atụ nke a. Dabere n'ụdị, ike na elu igwe anaghị agba nchara, ọ nwere ike ịpụta ntụpọ nchara ma ọ bụ agba ka oge na-aga.
Iru mmiri, oke mmiri na ikuku nnu (dị ka mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri) nwere ike ime ka nchara nchara n'elu grill, dịka ịcha ọcha na ihe nhicha ndị ọzọ nwere chlorine.
Ịcha ọcha na ihe ndị ọzọ na-ehicha ihe nwere chlorine nwere ike ime ka nchara nchara, nke mere na ekwesighi iji ha mee igwe anaghị agba nchara.
Anwụrụ ọkụ na-etolite mgbe a na-esi nri, nke nwere ike ikpo ọkụ ma mee ka elu igwe anaghị agba nchara.
Ọkụ griiz na-eme ka elu igwe anaghị agba nchara, mana anaghị emebi ihe. Ịchacha ebe a na-esi nri mgbe niile na n'ime grill ga-ebelata ihe ize ndụ nke ọkụ na-achọghị.
Mara: Igwe anaghị agba nchara anaghị 'nchara' dị ka nchara a na-emekarị ebe oyi akwa oxide na-acha uhie uhie na-etolite n'elu wee gbapụ. Ọ bụrụ na ị na-ahụ nchara, eleghị anya ọ sitere na irighiri ihe nke ígwè (eg ígwè ajị) na-anakọtara n'elu nke igwe anaghị agba nchara. Ọ bụ ihe ndị a na-acha nchara ma ọ bụghị igwe anaghị agba nchara n'onwe ya.
Otu esi egbochie ihe nrapu gị?
Debe ya ọcha
Ekwesịrị ịsacha grills mgbe ejiri ya ọ bụla iji gbochie nchara. Gbaa mbọ hụ na ịgbanyụ ọkụ grill gas tupu ihicha, ma jiri ahịhịa grill wepụ ihe ọ bụla nwere ike ịrapagidesi ike na grates. Ị nwekwara ike ịchọrọ ihicha ya na brush na-enweghị bristle iji zere bristles waya ọ bụla na-atọhapụ ma rapara na grates gị.
Maka ighe unyi, ọ kacha mma ihicha ha mgbe ọ ka na-ekpo ọkụ, na-eji ahịhịa na fesa mmiri. Mgbe ihichachara grille ahụ ma kwe ka ihe mgbochi ahụ dị jụụ, tụfuo ntụ ọ bụla fọdụrụnụ ma ọ bụ icheku nke fọdụrụ na grill ma jiri mmiri dị nro sachaa igbe esi nri.
Na-enye ya ọcha dị omimi mgbe ọ bụla
Ọ dịkwa mma ka ị na-eme ihe dị omimi karị mgbe niile. Iji mee nke a, wepụsịa grates wee kpochaa ya na ngwọta nke mmiri ọkụ, otu iko ncha efere dị nro, na 1/4 iko soda. Richaa ha maka otu awa wee soro ahịhịa ahụ. Mgbe grill ahụ dị jụụ, jiri akwa dị nro hichaa grill ahụ iji wepụ ihe ọ bụla rapaara na nri ma ọ bụ ahịhịa bristles.
Na-esote, hichaa ọkụ grill na ihe nhicha na-adịghị mma na akwa. Ị ga-achọ idowe traktị mmiri na-asọ asọ ma dị ọcha, n'ihi na ọ nwere ike ịdị mfe ịnweta mmiri mmiri. Jiri ahịhịa ọkpọkọ hichaa oghere ndị na-ere ọkụ na oghere ntinye kwa.
Echefula iji ncha na/ma ọ bụ ncha na-asa obere efere sachaa mpụga grill gị. N'agbanyeghị aha ya, ọbụna nchara "igwe anaghị agba nchara" nwere ike ịdaba na nchara na nchara, dabere na ọkwa na ọkpụrụkpụ nke ígwè ahụ.
Mmanụ grill gị
Mgbe ihichachara, kpuchie ma gas na unyi grates na obere oyi akwa nke mmanụ ihe oriri iji gbochie nri ịrapara na ha n'ọdịnihu. Ime nke a ga - enyere aka ichughachi mmiri - ya mere nchara. Otú ọ dị, ka ọ dịrị nchebe, ejila mmanụ aerosol nke mmanụ ihe oriri, n'ihi na a mara ọkwa ikuku ikuku na-agbawa n'akụkụ ọkụ. Kama nke ahụ, were obere mmanụ kụchie akwa efere ma were nke ahụ mee ihe n'ọkụ.
Kpuchie ya wee banye n'ime ụlọ
Mmiri bụ ihe kacha njọ nke ga-agbaji grill gị ma belata ndụ ya. Mgbe oge nri gwụchara, tinye naịlọn ma ọ bụ mkpuchi vinyl dabara adaba na akwa akwa n'obere ihe ị na-esi nri.
Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, bufee grill n'ime ụlọ n'ime ebe a na-adọba ụgbọala ma ọ bụ ebe a na-ekpuchi ekpuchi, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-ebi na ihu igwe na-adịkarị elu iru mmiri, nnukwu mmiri ozuzo ma ọ bụ snow. Ọ bụrụ na ị bi nso n'oké osimiri, kpachara anya karịsịa maka ihicha na ikpuchi grill gị, n'ihi na nnu dị elu nke ikuku nwekwara ike imebi ya.